I-CRM Trends Trends ye-2017 | Uqeqesho lwe-CRM
- I-CRM i-Multichannel iya kufika:
- Gcina i-AI-Power-Bots:
- Ukuhlanganiswa ne-Predictive Analytics:
- Ukunyuka kwe-CRM yentlalo:
- Ukujonga kwi-CRM yesimo:
Isisombululo se-CRM kwiintshukumo ezahlukeneyo:
I-CRM (Ulwalamano lwabaThengi abaPhambili) baye babona uphuhliso olungalinganiyo kwilizwe lokuthengisa. Imibutho yezoshishino ikulindeleke kwiindlela ze-CRM eziphezulu ze-2017 ukufumana inzuzo ngala maphepha kwaye zibandakanye abaxhasi babo.
Imibutho ye-Savvy ayigcini mizamo yokubonisa ukubaluleka kwabo kubaxhasi kwintsimi yokuthengisa yedijithali enamandla. Ukubulela kwabo kuye kwabangela ukuphuculwa koqeqesho lwe-CRM, eliyinxalenye eyisiseko kwiofisi zokuthengisa phezu kwazo zonke izitenxo. Nazi ezinye iipatheni ezintsha ze-CRM ezifunekayo ukunyuka kwi-2017:
Njengoko unxibelelwano lwabaxhasi lukhokelwa ngokuqhubekayo phezu kwamaphulo amanyathelo amaninzi, ukulungiswa kwe-CRM eqinisekisiwe ngamandla amaninzi amanyathelo aza kuphuhlisa njengomzekelo ophezulu.
Imibutho yokuthengisa ilawula ubuninzi beenkcukacha ezingenakulinganiswa. Ukufumanisa amava kunye nokuthatha imisebenzi efanelekileyo ngokubhekiselele kule nkcukacha ebanzi kukuvavanya. I-manmade brainpower (AI) bots iya kunika iindawo zokuthengisa eziphambili zolwazi kunye nokunceda abakhangisi ukuba baqulunqe amaphulo amashishini amatshini kunye namangalisa.
Isikhundla se-CRM sidibanisa ne-PA (Predictive Analytics) ixesha elide. I-2017 iya kubonelela ukuhlanganiswa kwangempela kwe-CRM kunye ne-PA ekuqwalaseleni izibalo ezixabisekileyo eziza kudala izikhokelo zokulungelelanisa.
I-CRM ilungile ukuya kwengubo engenakuqhathaniswa neendlela zokunxibelelanisa kwi-intanethi ukuthengiswa kwabaxumi. I-2017 iya kubona ukunyuka kwe-CRM yentlalontle kunye nokuzivocavoca kwiziteshi zentlalo kunye nokugxilwa kokuvavanya uviwo.
Abaxhasi bazama ukuqhubeka beqiqa kwaye bazimisele ukucima imiyalezo yabo yokuthengisa. I-2017 iya kubonelela ukuphuhliswa kwikhono lokuxhasana nokuxininisa kwi-hyper-focusing, ukubeka ingqalelo kwiingcezu ezincinci zabaxumi kwaye uthethe ukuthengisa ngokufanelekileyo ngokugxininisa kubaxhasi kwi-channel efanelekileyo, ngexesha elifanelekileyo, ngomyalezo olungcono.
Njengoko abathengi balindele imilayezo yeempawu, abathengisi baya kufuna ukulungiswa kwe-CRM. Izahlulo zokuthengiswa kwabaxhasi ziya kunika iimpendulo ezingavamile kwiindawo ezahlukeneyo eziquka iziseko zebhajethi, imibutho ye-intanethi, umdlalo, kunye nokunye.
Intuthuko yokuthengisa ngokubhekiselele ekubambeni idatha sele ibe yimfuneko yokuthengisa iimveliso. Kwi-2017, abathengi banokulindela imiyalezo eqinileyo kunye nengqiqo ejongene nokuthambekela kwabo kunye neemfuno zabo. Oku kungafezwa ngokunikezelwa koqeqesho lwe-CRM kunye namalungiselelo asebenzayo kwiminqweno yabaxhasi.
Umgcini weeNjineli zeCisco zixhomekeke ngokupheleleyo kwiCCNA Certification
Uphuhliso lweZofthiwe: Yintoni iHolo?